ကိုယ့်Crushကကိုယ့်ကို လူအများကြားမှာ ထင်သာမြင်သာနဲ့ သတိထားမိလာအောင် ဘယ်လိုဝတ်စားဆင်ယင်နေထိုင်သင့်လဲ? - Myanmarload
ကိုယ့်Crushကကိုယ့်ကို လူအများကြားမှာ ထင်သာမြင်သာနဲ့ သတိထားမိလာအောင် ဘယ်လိုဝတ်စားဆင်ယင်နေထိုင်သင့်လဲ?
လွန်ခဲ့သော ၈ လ က 20:13 September 08, 2019
ညစ်ပတ်တဲ့ယောက်ျားလေးတွေဆိုရင် ဘယ်မိန်းကလေးမှစိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ သူ့အကြောင်း ကိုယ့်အကြောင်းသိသွားတဲ့ Rsဘဝရောက်သွားရင်တော့ မပြောလိုပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ Crushရှေ့မှာတော့သန့်နေဖို့လိုပါတယ်နော်။ တန်ဖိုးကြီးတာတွေဝတ်စားပြင်ဆင်ထားမှ မိန်းကလေးတွေကြိုက်တယ်ဆိုတာမျိုး ဒီဘက်ခေတ်မှာမရှိပါဘူး။ ကိုယ်သာသန့်သန့်လေးနေရင် Crushရဲ့အာရုံစိုက်မှုတွေ အကြည့်တွေက ကိုယ့်အနားကခွာမှာမဟုတ်ပါဘူး။
(၂)ကိုယ်တိုင်းနဲ့ချုပ်ထားတဲ့ အဝတ်အစား(သို့) ကိုယ်နဲ့အနေတော်ဖြစ်တဲ့ အဝတ်အစား။
ကိုယ့်ကောင်မလေး မျက်စိထဲမှာ စမတ်ကျနေဖို့လိုပါတယ်။ သန့်သန့်ပြန့်ပြန့်အဖြူရောင်လက်ရှည်လေးတော့ဝတ်ပါရဲ့ ကိုယ်နဲ့မတော်ဘဲပွနေတာမျိုးတွေ ကြပ်နေတာမျိုးတွေဝတ်ရင် ဘယ်လိုပဲတောက်တောက်ပြောင်ပြောင်ဝတ်ဝတ် အဖိုးကြီးပုံစံနဲ့လို့သတ်မှတ်ခံရမှာသေချာပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်တိုင်းနဲ့ချုပ်ထားတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်နဲ့Fix ဖြစ်မယ်ဟာမျိုးလေးတွေရွေးဝတ်စေချင်ပါတယ်နော်။ကျောင်းသားဆိုရင်တော့ ယောပုဆိုးလေးနဲ့ လည်ကတုံးအင်္ကျီအဖြူသန့်သန့်လေးက မိန်းကလေးတွေအကြွေဆုံးစတိုင်ဆိုတာကို ထပ်လောင်းပြောပြလိုက်ပါရစေနော်။
ဘီးရာကြီးပေါ်လွင်နေအောင် ဖီးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ခေါင်လိမ်းဆီ(သို့) ဂျယ်လ် ကို လက်ထဲမှာပွတ်ပြီး လက်နဲ့ သေေဥပ်သပ်လေးသပ်ခိုင်းတာပါ။ ဖီးဆိုတိုင်း ဘီးရာကြီး တွေအထင်းသားနဲ့ ပုံတုံးကြီးတွေဖီးသွားရင် တောသားလို့အပြောခံရမှာသေချာပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ့်ဆံပင်လေးကို ဖွာလန်မနေစေဘဲ အနည်းဆုံတော့ ဆီလေးပါးပါးနဲ့နဲ့ သေေဥပ်သပ်ပြင်စေချင်ပါတယ်နော်။
အပေါ်ကအချက်တွေကို သေချာလုပ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်crushရဲ့အာရုံစိုက်မှုတွေကိုရပြီးသားဖြစ်နေမှာပါ။ ဒီတော့ နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ စကားပြောတဲ့အခါမှာ ဘယ်သူနဲ့ပဲပြောပြော ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ပုံစံနဲ့ စားကို ပြေပြေပြစ်ပြစ်ပြောပါ။ စကားလည်း အရမ်းကြီးမပြောမိဖို့တော့လိုပါတယ်။ လမ်းလျှောက်ရင်လည်း ယုံကြည်မှုရှိရှိပုံစံနဲ့လျှောက်ပါ။ လက်ပြင်ကြီးကုန်းပြီးတော့ မလျှောက်ပါနဲ့။ စမတ်ကျကျနေထိုင်ပြောဆိုပါ။
မိန်းကလေးတွေဟာ အနုပညာသမား ဒါမှမဟုတ် အားကစားသမားတွေကို သဘောကျတတ်ပါတယ်နော်။ တကယ့်Professional အားကစားသမားတစ်ယောက်မဟုတ်ရင်တောင် အားကစားလုပ်တဲ့ ယောက်ျားလေးတွေကို စိတ်ဝင်စားတတ်ကြပါတယ်နော်။ ဒီဘက်ခေတ်မှာခေတ်စားလာတာကတော့ Gymတို့ ဘောလုံးကစားတာတို့ဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ခုခုတော့ ကစားသင့်ပါတယ်နော်။ ဒါကလည်း ခန္တာကိုယ်တောင့်တင်းသန်မာဖို့အတွက် အထောက်အကူပြုတာကြောင့် အားကစားလုပ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဟာ ဘာဝတ်ဝတ်စမတ်ကျနေမှာအသေအချာပါပဲနော်။